Install Bluetooth Adapter on Windows | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
laptops အမြဲဘလူးတုသ်-အဆင်သင့်ထံသို့လာကြပြီမဟုတ်. built-in Bluetooth ကိုစွမ်းရည်မရှိဘဲကွန်ပျူတာများကိုကွန်ပျူတာပေါ်က USB port ကိုသို့ပလပ်ထိုးပေးရမယ့်သေးငယ်တဲ့လက်ခံ၏အကူအညီနှင့်အတူဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ devices များနှင့်အတူအပြန်အလှန်.
အဆိုပါများအတွက်ယာဉ်မောင်း USB ကဘလူးတုသ် adapter တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း install လုပ်ဘို့သတိပေးခံရနေကြတယ်. သင် prompt ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးနှင့်သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကို install နေတယ်ဆိုရင်, မည်သည့် firewall သို့မဟုတ် antivirus ကို applications များတပ်ဆင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမသန်စွမ်းသူများနှင့်မဟုတ်သေချာစေရန် ကျေးဇူးပြု.. က installed ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကသင်ကထပ်မံ firewall သို့မဟုတ် antivirus ကိုလျှောက်လွှာကို enable စေခြင်းငှါ.
manual တပ်ဆင်ခြင်း >>>
1. ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပွင့်လင်း Device Manager “စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ” စတင် Menu ထဲမှာဒါမှမဟုတ် screen ကိုစတင်ရန်.
2. အဆိုပါ Device Manager စာရင်းအတွက်က USB device ကို Locate (ပုံမှန်အားဖြင့်အခြားကိရိယာများကိုအပိုင်းအောက်မှာ).
3. ညာဘက် device ကိုပေါ် click နှိပ်ပြီး Update ကိုယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲကိုကလစ်နှိပ်ပါ…
4. အဆိုပါ Update ကိုယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲထဲမှာ, ကားမောင်းသူ software ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာ Browse wizard ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
5. ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ device ကိုယာဉ်မောင်းတစ်ဦးစာရင်းထဲကကောက်စို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
6. Show ကိုအားလုံးဖုန်းများအတွက်ကိုရွေးပြီး Next ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. အဆိုပါရှိသည် Disk ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ… ကြယ်သီး.
7. Browse ကိုနှိပ်ပြီး installation ကို directory ထဲတွင်ယာဉ်မောင်းရဲ့ဖိုင်တွဲ navigate. ပုံမှန်အားဖြင့်, တည်နေရာဖြစ်ပါသည်: “ကို C:\_Program Files (x86)…
8. သငျသညျကို manually တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလျှောက်ထား device ကို functioning ကိုရပ်တန့်စေခြင်းအလိုငှါဖျောပွထားတဲ့ Update ကိုယာဉ်မောင်းသတိပေးခြင်းပေးတဲ့ dialog ခံခြင်းငှါ. ဆက်လက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
9. အဆိုပါ wizard ကိုသစ်ကိုယာဉ်မောင်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ wizard ကိုဖြည့်စွက်ဖို့ပိတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ဘလူးတုသ်ကားမောင်းသူပြတင်းပေါက် XP ကို >>>
1.ယင်းကွန်ပျူတာ၏စကဘလူးတုသ် adapter plug USB port ကို
2. အဆိုပါယာဉ်မောင်းတပ်ဆင် Wizard ကိုပုံပေါ်. အောက်ကအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ. ယာဉ်မောင်းတည်ရှိရာ directory ကို Browse ကိုရွေးချယ်ပါ.
ဘလူးတုသ်ကားမောင်းသူပြတင်းပေါက် 8 >>>
1. အဆိုပါ plug ဘလူးတုသ် adapter ကွန်ပျူတာ၏ USB port ကိုသို့
2. စနစ်အတွက်ယာဉ်မောင်း Install
2.1 ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်အောင်မြင်သည်အထိစနစ်တစ်မောင်းသူကို install ပါလိမ့်မယ်
Start ကိုကလစ်နှိပ်ပါ -> ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က Settings -> Control Panel ထဲက -> devices များနှင့်ပုံနှိပ်. အောက်က icon ကိုကြည့်ရှုပါ, အရာကိုဆိုလိုသည်ကဆက်ခံထားပါတယ်.
2.2 ယာဉ်မောင်းအလိုအလျှောက် install လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်
Start ကိုကလစ်နှိပ်ပါ -> ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က Settings -> Control Panel ထဲက -> devices များနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အောက်ကအိုင်ကွန်မြင်
အဆိုပါအမည်မသိစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ, ကို select: hardware, ကလစ်: properties ကို
ကို Select လုပ်ပါ: မောင်းသူ, ကလစ်: ယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
ကို Select လုပ်ပါ: သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးအဘို့ Browse ယာဉ်မောင်းဆော့ဖျဝဲ
Browse ကို, ယာဉ်မောင်းတည်ရှိရာ folder ကို select လုပ်ပါ, နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ: နောက်တစ်ခု
တပ်ဆင် '' Finish ကိုပြီးစီး’ >>>
ယင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အပြီးသတ်” ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးစီးသောအခါ. သတိပေးခံရလျှင်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ. တစ်ဦးကဘလူးတုသ် icon ကိုမျက်နှာပြင်အနိမ့်-လက်ဝဲထောင့်တွင်တည်ရှိသည် desktop ပေါ်မှာ၏အသိပေးချက်ကိုဧရိယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်. ဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှုယခုသင့်လက်ပ်တော့အပေါ် enabled ဖြစ်ပါတယ်.
Right-Click “ဘလူးတုသ်” အခြားဘလူးတုသ်-enabled ကိရိယာနှင့်အတူတွဲဖို့ option ကို icon ကိုရွေးလိုက်ပါ, အဆိုပါရရှိနိုင်ပါကဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှုစူးစမ်း, အဆိုပါ adapter ကို configure ဒါမှမဟုတ် Bluetooth ကိရိယာကိုရပ်တန့်.
ပိုများသော Tech မှ-သတင်းအချက်အလက်များ, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
HTC က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ processor ​​ကို OS ကို-STORE ဥပဒေရေးရာအနက် device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ Intel က Nokia က စီပီယူ Software များ နည်းပညာ HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း Samsung က Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု
Nokia က Sony Ericsson က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet နည်းပညာ HTC က ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE device ကိုမော်ဒယ် processor ​​ကို စီပီယူ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics Samsung ရဲ့ Galaxy စမတ်ဖုန်းများ Software များ ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows Intel က မိုဘိုင်းဖုန်း Qualcomm မှ